सिद्धार्थलाई पहिले नै कुनै संकेत थियो ? ‘विवाह कहिले गर्छौै’ भनेर प्रश्न गर्दा दिन्थे यस्तो अचम्मको जवाफ – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/सिद्धार्थलाई पहिले नै कुनै संकेत थियो ? ‘विवाह कहिले गर्छौै’ भनेर प्रश्न गर्दा दिन्थे यस्तो अचम्मको जवाफ
सिद्धार्थलाई पहिले नै कुनै संकेत थियो ? ‘विवाह कहिले गर्छौै’ भनेर प्रश्न गर्दा दिन्थे यस्तो अचम्मको जवाफ
एजेन्सी । टिभी को सुन्दर र अविवाहित सिद्धार्थ शुक्लाको निधन एक ठूलो झटका भन्दा कम छैन। सिद्धार्थको एक बलियो महिला फ्यान फलोइङ थियो। सिद्धार्थलाई अक्सर उनको विवाहको बारेमा प्रश्न सोधिन्थ्यो ।
तर अभिनेताले यो प्रश्नको जवाफ निकै अचम्म तरिकाले दिन्थे । अहिले उनी ४० वर्ष सम्म अविवाहित हुनु र यस सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ पनि अचम्म तरिकाले दिनुमा कतै उनलाई आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा कुनै संकेत थियो की भन्ने आशंका गरिएको छ । सिद्धार्थ शुक्लाको बलियो र आकर्षक व्यक्तित्वको कारण, धेरै युवतीहरु उनको फ्यान थिए । रियालिटी शो बिग बोस जितेपछि, सिद्धार्थलाई अन्तर्वार्ता र सोशल मिडिया लाइभमा विवाहका बारेमा प्रश्न सोधियो।
कुराकानी मा, जब सिद्धार्थ शुक्लालाई उनको विवाहको योजनाको बारेमा सोधियो, अभिनेताले सलमान खानको विवाहको कुरा ल्याएर प्रश्नकर्तालाई अलमल्याए । सिद्धार्थले भनेका थिए( म सलमान सरको विवाहमा एकपटक गएर मात्र आफ्नो विवाहको बारेमा सोच्नेछु ।
सिद्धार्थले आफ्नो जीवन साथीको बारेमा भनेका थिए कि उनलाई कस्तो जीवनसाथी चाहिन्छ ? अभिनेताले भनेका थिए ( म चाहन्छु कि जो मसँग हुन्छ उ अरु कसैसंग पनि नहोस् ।
सिद्धार्थ शुक्ला बिग बोस को घर मा धेरै महिला प्रतियोगीहरु संग रमाइलो गरेको देखीयो। रश्मी देसाई, शेफाली बग्गा, माहिरा शर्मा, मधुरिमा तुला, देविलिना भट्टाचार्य संग सिद्दार्थको शो मा धेरै चर्चा भएको थियो।
सिद्धार्थ शुक्ला बहु प्रतिभाशाली थिए। उनको एक(लाइनर अचम्मको थियो। उनको पंचलाइन सिद्धार्थ शुक्लाको सिजनमा धेरै प्रसिद्ध थियो। सिद्धार्थ एक यो द्धा जस्तै खेल खेले र जिते।
सिद्धार्थ को बिग बोस १३ मा, शहनाज गिल को केमिस्ट्री, प्यारा नोस्टाल्जिया र मीठो मीठो झ ग डा धेरै मन पराइयो। शहनाज गिल शो मा सिद्धार्थ शुक्लाको लागी समर्थन प्रणाली थियो।
धादिङ्गमा चट्याङ लागेर २ को मृत्यु, ७ घाइते